कि सम्झौता नगर्नु, कि पूरा गर्नु ?
डा. गोविन्द के.सी.ले १६औं अनसन इलामबाट सुरु गरेका छन् । उनको माँग मात्र अपाराधिकरणको अन्त्य र मेडिकल शिक्षालाई कानुनसम्मत बनाइनु छ । यसैले नेपालभरि नै उनको अनसनको प्रभाव परेको छ, आमनागरिकले अनसनको समर्थन गरेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यो भनेको सरकारको आलोचना नै हो ।
६ बुँदे माँग छन् । यी माँगलाई राजनीतिक रुप दिएर पन्छिनु सरकारको नालायकी हो । सरकारले उनका माँग ठिक थिएनन् भने पटक पटक उनका माँगमा किन समर्थन गरेको हो ? माँग पूरा हुने वचन दिइसकेपछि पूरा गर्नुपर्छ सरकारले । पूरा नगर्नु सरकारको लाक्षीपनमात्र होइन, असफलता पनि हो ।
राज्य लोककल्याणकारी हुनुपर्छ । राज्यले बोलेपछि त्यो पूरा हुनुपर्छ । राज्यले पटक पटक समर्थन गरिसकेपछि, अहिले मान्दिन भन्नु अशोभनीयता हो ।
डा. के.सी.सँग आफैले गरेको सम्झौता र प्रतिबद्धताको बिरुद्ध सरकार नजाओस् । संवाद र सहमतिद्वारा अविलम्ब यसको समाधान गरोस् । आफ्ना प्रतिवद्धतामा चुक्नु भनेको सरकार विश्वसनीय छैन भन्ने अर्थ पनि लाग्छ । जनताको विश्वासको मत जितेर दुई तिहाइको सरकार चलाएको प्रधानमन्त्रीले यसरी जनताका अपेक्षालाई उपेक्षा गर्नु हुन्न, यसले गलत सन्देश प्रवाह हुनेछ ।